» देशैभरका कुखुरामा रानिखेत रोगको प्रकोप, के हो रानिखेत रोग ?
फाल्गुन, काठमाडौं – देशैभरका कुखुरामा यति बेला रानिखेत रोगको प्रकोप बढिरहेको छ । रोगले कुखुरापालक किसानलाई हालसम्म केकति क्षति भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक भने आउन सकेको छैन ।
आफ्ना मातहतका पाँच ओटै प्रयोगशाला मार्फत गरेको नमूना परीक्षणमा रानिखेत रोगको संक्रमण अन्य रोगभन्दा बढी देखिएको विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताए ।
रानिखेत रोग पारामेक्सो प्रजातिको भाइरसका कारण कुखुरामा लाग्ने सरुवा रोग हो । दक्षिण एशियामा यो रोग सर्वप्रथम भारतको उत्तराञ्चलस्थित रानिखेत भन्ने स्थानमा देखिएकाले यसको नामकरण पनि रानिखेत हुन गएको हो । विज्ञहरूका अनुसार यो रोग संक्रमित दाना, पानी, चराचुरुङ्गी र हावा पानीको माध्यमबाट फैलिने गर्छ ।